Vangaindrano: Hanao foaran’ny jirofo
vendredi, 24 novembre 2017 15:14
Telo andro no hanatanterahana ny foaran'ny Jorofo eto Vangaindrano dia ny 1-2-3 desambra 2017, izay karakarain'ny Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria Atsimo Atsinanana.
Tanjona ny hanatsarana an'ity seha-pihariana jorofo ity, izay voly fanondrana mitana ny anjara toerana lehibe eo amin'ny toekarenan'ny Faritra Atsimo Atsinanana satria dia 3000 taonina eo isan-taona ny jorofo miala avy ao amin'ny faritra.
Hovoaboasana amin'ny alalan'ny famelabelarana arahina adihevitra ny tontolon'ny jorofo ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana sy eto Madagasikara. Tsy ny jorofo ihany no haseho amin'io fa ireo vokatra mampiavaka ny Faritra Atsimo Atsinanana sy ny resaka kolontsaina ka ao ny nentim-paharazana sy miaraka amin'ireo mpanakanto goavana sy avy eto an-tanàna.
Hisy ihany koa ny lalao ara-panantahantena.
Efa mamaramparana ny taom-piotazana jorofo ny aty Vangaindrano amin'izao.
Analakely: Vitrine de l'Industrie
Jorofo: Tsy mena-mitaha ny Faritra Atsimo Atsinanana »
mardi, 12 décembre 2017 13:24
mardi, 12 décembre 2017 08:30
lundi, 11 décembre 2017 09:29
lundi, 11 décembre 2017 07:41
lundi, 11 décembre 2017 06:48
lundi, 11 décembre 2017 04:53
dimanche, 10 décembre 2017 19:50
cheapest viagra overnight shipping tadalafil without prescription buy cialis without prescription canadian pharmacy viagra online pharmacy without prescription viagra online india Canadian Pharmacy Online generic 5mg cialis new healthy man maxifort
samedi, 09 décembre 2017 21:22